Nwa nkita - JUAN JUAN
Ezigbo maka ụdị osisi buru ibu, nkịta ọtụtụ, ma ọ bụ tinye oge oge n'ime ụlọ - Nnukwu ihe eji azụ ọzụzụ carbon dị ukwuu dị ukwuu maka nnukwu ụdị nkịta ma ọ bụ ọtụtụ nkịta, na-ekpuchi ebe dị elu karịa padị pusi.
Nrapado okpokoro tebụl egbochi gboo- Ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị banyere ihe nkịta nkịta a na-amị amị ma na-amị ala niile; taabụ n'akụkụ nkedo na-edebe nkịta nkịta ndị a
Mgbapu na-ekpuchi mkpuchi na mkpuchi na-echebe ala na kapeeti.
Ezigbo maka ụdị osisi buru ibu, nkịta ọtụtụ, ma ọ bụ tinye oge oge n'ime ụlọ - Nnukwu ihe eji eme ka carbon rụọ ọrụ dị ukwuu maka nnukwu ụdị ma ọ bụ ọtụtụ nkịta, na-ekpuchi ebe dị elu karịa padị puppy mgbe niile.
Nrapado okpokoro tebụl egbochi gboo- Ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị banyere ihe nkịta nkịta a na-amị amị ma na-amị ala niile; taabụ n'akụkụ taabụ na-edebe nkịta nkịta ndị a n'ọnọdụ Nkịtị mkpuchi na mkpuchi mkpuchi na-echebe ala na kapeeti.
ADHERES ONTO WALL HELE NKWA MALEM MALE MMAD MALE - Ihe nrapado nke padị puppy ndị a na-eme ka ọkara nke mpempe akwụkwọ ọzụzụ na mgbidi, na-eme ka ọ dị mma maka nkịta chọrọ enyemaka na-achọ.
AKW SKWỌ AKW SKWỌ AH LRAR ARB THR TH NA-AK .KỌ - Nnukwu obi ụtọ a maka anụ ụlọ bụ nnukwu ibu, na-ekpuchi ebe dị elu karịa mpempe akwụkwọ oge niile iji mee ka ha dị irè maka ebe ọ bụla n'ụlọ
SUPER ABSORBENT, Arụ Ọrụ Carbon Na-anaghị achọ isi - Ọdịdị na-adọrọ adọrọ nke ọrụ ọzụzụ carbon a na-arụ ọrụ wee wee puppy pads na-egbochi isi ísì iji mee ka ụlọ gị na-esi ísì ụtọ.
Oké ọrụ absorbent isi nwere ike ijide 2-3 iko mmiri mmiri
ONYE NA-EME IHE KWURU - A na-emepụta pad ọzụzụ anụ ahụ na pheromone na-adọrọ adọrọ ka nkịta gị wee mara ebe ị ga-aga
100% ezigbo osisi pulp na super absorbent polymer mere nke dị elu arụmọrụ mmiri absorption oyi akwa, nwere ike iji maka ụbọchị dum
Ngwa akụrụngwa iji mepụta nkịta nkịta
Toiletlọ mposi dị larịị maka nkịta: Obere ụlọ mposi, S bụ ogo ziri ezi, ogo buru ibu, Model M dabara adaba
Nkịta onu: Model M adabara
Model S maka (NW <4kgs), Model M For (NW <10kgs), Model L maka (NW <20kgs), Ndị ọzọ ahaziri size dị.
Osote: Aka aka
Disinfecting Mkpa ipka
Acha Acha ((lọ)